बीमा: प्रकृति, समारोह, फारम, बीमा र बीमा को अवधारणा। अवधारणा र सामाजिक बीमा को प्रकार
मिति, नागरिक जीवन को सबै क्षेत्रहरू मा एक प्रमुख भूमिका बीमा खेल्छ। अवधारणा, सार, सम्बन्ध प्रकार देखि करार को अवस्था र सामग्रीहरू वस्तु र दल सिधै निर्भर छन्, वैविध्यपूर्ण छन्। बीमा एउटा मुख्य तत्व जोखिम छ। यी शब्द अन्तर्गत सम्झौता वस्तु हानि जसमा अवस्थामा implies। त्यहाँ विविधता, बीमा र बीमा को कोजिमा फरक अवधारणा लागि जिम्मेवार छन् भन्ने धेरै जोखिम छन्। आफूलाई आफ्नो स्वास्थ्य, जीवन वा महत्वपूर्ण क्षति को सम्पत्ति सम्बन्धित घाटा देखि रक्षा गर्न - व्यक्ति अनुबंध प्रवेश गर्ने, एक महत्वपूर्ण वित्तीय चासो छ।
बीमा र सामान्य मा प्रकार को अवधारणा सबैलाई ज्ञात छन्। यो प्रतिकूल परिस्थितिमा को मामला मा सम्पत्ति घाटा कम गर्न डिजाइन आर्थिक सम्बन्ध को एक प्रणाली छ। अर्को शब्दमा, यो सम्झौता आफूलाई कारण दुर्घटना एक ठूलो राशि गुमाउने जोखिम देखि रक्षा गर्न मद्दत गर्छ। सहभागीहरू जो गठन योगदान बनाउन को आरक्षित निधि। बीमा (सम्पत्ति, स्वास्थ्य र यति मा। पी) को वस्तु क्षतिग्रस्त थियो भने, संगठन घाटा लागि क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक रकम दिन्छिन्।
तर, विषय मात्र होइन विभिन्न क्षति को मामला मा क्षतिपूर्ति प्राप्त छ, तर सम्झौता मात्र ती अवस्थाहरू छन् कि पूर्व-निर्दिष्ट। हर्जाना निम्त्याउँछ जुन घटना, बीमा घटना भनिन्छ। यो अवधारणा अन्तर्गत सामाग्री पर्याप्त घाटा नेतृत्व सक्छ जो अनियमित अवस्था चाहनुभएको छ।
यस्तो सेवा प्रदान कानुनी निकायहरूको underwriters भनिन्छ। यसको गतिविधिहरु लागि, तिनीहरूले राज्य आवश्यकताहरू पूरा र इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ। बीमा को अवधारणा, यसको कार्य र प्रकार रूसी संघ को सान्दर्भिक व्यवस्था निर्दिष्ट। त्यसैले, आधिकारिक कम्पनी संग एक सम्झौता साइन इन गर्न निर्णय गर्ने व्यक्ति अधिकार उल्लङ्घन गरिने भयभीत हुन सक्दैन। संगठन को गतिविधिहरु कारण प्रिमियम गर्न बन्द दिन्छिन् - remuneration करार सर्तहरू प्रदान।
बीमा र प्रकार को अवधारणा को आदिम फारम पुरातन समयका मानिसहरूले खराब मौसम र प्राकृतिक प्रकोप अवसर को अन्न र भवन निर्माण सामाग्री टन्न भरेर जब मा देखियो। मिति, सम्झौता यस प्रकारको व्यक्तिविशेष र कानुनी निकायहरूको वित्तीय स्थिरता ग्यारेन्टी जो अर्थव्यवस्था, जग छ। चरणमा विकसित, सुरक्षा र बीमा को प्रकार को आधुनिक अवधारणा आर्थिक सम्बन्ध नयाँ प्रकारका द्वारा पूरक भइरहेको। क्षमता काम को अस्थायी वा स्थायी हानि को घटना मा आफु को लागि प्रदान गर्न - क्षणमा, यो माथिको सबै एक आफ्नो कारोबार रक्षा गर्न उद्यमीहरू र नागरिक लागि मौका छ। सम्बन्ध यस प्रकारको महत्वपूर्ण कार्य, जो बीच निम्न छन् छ।
कारण कुनै परिस्थितिमा को उद्भव गर्न बीमा घाटा लागि क्षतिपूर्ति गर्न पर्याप्त रकम सुनिश्चित
ठूलो संगठन प्रतिकूल परिस्थिति को जोखिम कम गर्न आफ्नो आय को भाग आवंटित
बंदोबस्ती जीवन बीमा मात्र एक क्षतिपूर्ति समारोह कार्य, तर पनि लाभदायक एक व्यक्ति गर्न
कम्पनीहरु केहि जोखिम बारेमा ठूलो मात्रा तथ्याङ्क जानकारी, घटना आफ्नो सम्भावना भेला
अनिवार्य र स्वैच्छिक: बीमा बारी मा, दुई प्रकारका समूहबद्ध छन् जो धेरै प्रजाति विभाजन गरिएको छ। वर्गीकरण लागि मुख्य मापदण्ड करार को विषय हो। धन, स्वास्थ्य, पेसा: मिति, बीमा सार्वजनिक जीवनको व्यावहारिक सबै क्षेत्रहरू समेट्छ। सम्बन्ध विभिन्न प्रकारका तालिकामा देखाइएको तीन क्षेत्रहरु मा संयुक्त छन्।
अचल सम्पत्ति, वाहन, आगो र प्राकृतिक प्रकोप जोखिम
जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना को सम्भावना, विदेश यात्रा गर्दा सम्झौता को निष्कर्ष
नागरिक, व्यावसायिक, निर्माता, कर्मचारी, कार मालिक
सम्पत्ति बीमा व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई लागि महत्त्वपूर्ण छ। सम्पत्ति क्षति आगो, दुर्घटना वा अन्य अवसर परिस्थितिमा कारण व्यापार मालिक अक्सर आफ्नै हालतमा सम्हाल्न असक्षम छन् जो लागत उच्च entail सक्छ। यस कारण, बीमा सम्झौता को निष्कर्ष - को लागि एक सामान्य अभ्यास। नि: शुल्क चिकित्सा हेरविचार, व्यापक निजी बीमा ग्यारेन्टी नगर्ने राज्य अमेरिका मा। अवधारणा र यस्तो सम्झौता को प्रकार सिधै मानव जीवन र स्वास्थ्य लिङ्क छन्। संयुक्त सुरक्षा प्रकार पनि जो धेरै प्रकार गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ अवस्थित।
जीवन र स्वास्थ्य
पश्चिमी राज्य अमेरिका मा, र सीआईएस देशहरूको धनी नागरिक बीच व्यापक निजी बीमा छ। संसारभरि विभिन्न कम्पनीहरु गतिविधिको क्षेत्रहरू एक विस्तृत विविधता कवर कि सेवाहरूको दायरा प्रदान: अवधारणा र यस प्रकारका प्रकार सामान्य तैयार मा सम्झौता पुग्न कठिन छन्। हामी यो बीमा को वस्तु मानिस र आफ्नो काम गर्न आउँछ जो सम्पत्ति चासो छ जहाँ सम्बन्ध यस प्रकारको छ भनेर भन्न सकिन्छ। करार विषयको हुन सक्छ:
स्वास्थ्य - सम्झौता को कि प्रकार को सबै भन्दा साधारण वस्तु, एक गम्भीर रोग रूपमा एक महत्वपूर्ण लागत आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। अवधारणा र स्वास्थ्य बीमा को प्रकार को दायरामा फरक र, फलस्वरूप, सेवा को लागत क्लिनिक मा प्रदान। करार सबैभन्दा असामान्य वस्तु एक व्यक्तिको जीवन छ। बीमा यस प्रकार समय (जस्तै अवकाश) को एक निश्चित अवधि पछि एक व्यक्ति भुक्तान छ पैसा को संग्रह वा आफ्नो मृत्यु पछि राजकुमार लागि प्रदान गर्दछ। तसर्थ, सम्झौता परिवारलाई जोगाउन र आरामदायक बुढेसकालमा सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ। दुर्घटना बीमा मान्य छोटो अवधि। क्षतिपूर्ति जब कारण मृत्यु वा अक्षम मान्छे को बाह्य कारणहरू भुक्तानी भएको छ। यस्तो सम्झौता अक्सर कुनै पनि व्यापार वा पर्यटक यात्रु, कर्मचारीहरु निष्कर्षमा पुग्न छ।
मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्झौताका विभिन्न प्रकारका वितरण, तर तपाईं जो साधारण अवधारणा र स्वास्थ्य बीमा को प्रकार, चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै को पहिलो, यो विभिन्न रोगहरु को उपस्थिति संग चिकित्सा सेवा को भुक्तानी मा प्रकट भएको छ, जो नागरिक सामाजिक सुरक्षा, छ। यो बीमा को दुई मुख्य प्रकार हो:
पछिल्लो जाने र नागरिकहरु द्वारा निष्कर्षमा विदेश यात्रा गर्दा सम्झौताहरू छन्। रूस मा सहित सबैभन्दा देशहरूमा, मा, वहाँ एक अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा छ। राज्य को सबै नागरिक को मद्दतले उपचार बराबर पहुँच र दबाइ प्राप्त। CHI प्रादेशिक कोष एक विशेष क्षेत्र मा बीमा व्यक्ति को संख्या निर्भर OMS बीमा को खातामा पैसा स्थान्तरण।
स्वैच्छिक चिकित्सा बीमा, अवधारणा, प्रकार, जसको फारम राज्य ती बाट धेरै फरक छ, विचार गर्नुहोस्। फरक सम्बन्ध यस प्रकारको केही चिकित्सकीय र रोगनिरोधी संस्थानहरुमा ग्राहकहरु गर्न थप सेवाहरू प्रदान गर्दछ भन्ने छ। करार वाणिज्य आधारमा प्रभावकारी छ र तपाईं विशेषज्ञहरु देखि राम्रो उपचार प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। विदेश यात्रा गर्दा चिकित्सा बीमा सम्झौता पनि माथि कोरिएका छ। केही देशहरूमा लागि, यो प्रक्रिया अनिवार्य छ।
कुरा, वाहन, अचल सम्पत्ति - सम्झौता यस प्रकारको मूर्त सम्पत्ति सुरक्षा गर्न अभिप्रेरित छ। दुवै शारीरिक र कानुनी संस्थाहरू लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ सम्पत्ति बीमा। अवधारणा र सम्झौता को प्रकार सम्झौताको अघिल्लो प्रकार समान छन्, करार मात्र वस्तु सामाग्री जोखिम र व्यक्ति को नहीं अत्यावश्यक गतिविधि छन्। सम्पत्ति बीमा - को स्वामित्व, निपटान र प्रयोग कुराहरू सम्बन्धित चासो सुरक्षा हो। जब ग्राहक गर्न सम्झौता मूल्य निर्दिष्ट सामाग्री गर्न क्षति भुक्तानी क्षतिपूर्ति छ। अनिवार्य र स्वैच्छिक: व्यक्तिगत सम्झौता संग मामला छ रूपमा, सम्झौता दुई प्रकारका छन्।
, आगो, विस्फोट, बिजुली को मामला मा क्षति लागि क्षतिपूर्ति झर्ने घातक उपकरण
आवरण लागत inoperative खरीद गर्दा बिग्रेको वा उत्पादन उपकरण लागि नजिक
व्यापार गतिविधिहरु लागि गरिब अवस्था को घटना संग सम्बन्धित घाटा लागि क्षतिपूर्ति
कारण उत्पादन मा रुकावट गर्न घाटा
उद्यमी डाउनटाइम को मामला मा गुमाए लाभ लागि क्षतिपूर्ति
वाहन बीमा वा तिनीहरूको भार
हावाहुरीमा कारण क्षति लागि क्षतिपूर्ति, एक कार, चोरी, दुर्घटना द्वारा मारा
सम्पत्ति नष्ट भने भएको र पुन: प्राप्ति हुँदैन, यसको मालिक आफ्नो पूर्ण मूल्य भुक्तानी भएको छ। कुरा को क्षति को मामला मा छैन सम्पूर्ण रकम reimbursed, तर केवल आवश्यक भागहरु तिनीहरूलाई मर्मत गर्न।
कहिलेकाहीं सम्झौता यस प्रकारको छुट्टै स्थिति रूपमा वर्गीकरण लागि विनियोजन गरिएको छैन, र सम्पत्ति सम्झौताको भाग मानिन्छ। यद्यपि, यो केही विशिष्ट सुविधाहरू छ। व्यक्ति यस प्रकारको लागि बीमा को वस्तु तिनीहरूलाई वा उनको सम्पत्ति हानि पैदा लागि तेस्रो-पक्ष दायित्व छ। रूसी व्यवस्था अनुसार, यस्तो अवस्थामा यो आवश्यक amends बनाउन छ। जो संग ग्राहक एउटा सम्झौता निष्कर्षमा छ कम्पनी, यसरी सम्पत्ति चासो सन्तुष्ट, क्षतिपूर्ति रकम को भुक्तानीको लागि आवश्यक आवंटन। साथै, अवधारणा र अनिवार्य बीमा को प्रकार समावेश छन्, र सम्झौता, विषय जो जिम्मेवारी, उदाहरणका लागि, कार मालिक लागि हो।
दुर्घटनामा को घटना मा ग्राहक कम्पनी तिनीहरूले सम्झौता निर्दिष्ट राशि अधिक छैन भने, सबै लागत दिन्छिन्। यसलाई आफ्नो कार को पाङ्ग्रा थियो जो कुरा छैन
प्रयोग मा ग्राहक वा निर्माताको उत्पादन प्रयोग द्वारा प्राप्त छ जो क्षति लागि क्षतिपूर्ति,
आर्थिक गतिविधिहरु को पाठ्यक्रम मा बीमा मानिसहरूको स्वास्थ्य, भौतिक र कानुनी व्यक्ति को सम्पत्ति र वातावरण कारण क्षति लागि क्षतिपूर्ति
आफ्नो व्यावसायिक कामको प्रदर्शन सम्बन्धित घाटा को क्षतिपूर्ति (त्रुटिहरू, लापरवाही)
जिम्मेवार पाल्तु जनावर मालिक, घर र जमीन, शिकारी, बिल्डर्स र यति मा। एन
उत्पादन समयमा दुर्घटना
सम्झौता प्रदूषण को जोखिम सम्बन्धी, "पारिस्थितिक बीमा" भनिन्छ। अवधारणा र सम्झौताको प्रकारका वर्गीकरण को अघिल्लो स्थितिहरु को प्रावधान समावेश गर्नुहोस्। यो सम्झौता वातावरणमा प्रदूषण क्षति कारण क्षतिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। केही emergencies मा भूमि र पानी प्रयोग सम्भव नहुन सक्छ, र एक विशेष क्षेत्र मा मान्छे फेला - स्वास्थ्य को लागि सुरक्षित। यस्तो अवस्थामा लागत उच्च entail। पर्यावरण बीमा को प्रकार:
निजी (जीवित वा उच्च जोखिम क्षेत्रमा काम नागरिकहरु को जीवन);
सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति, जो पर्यावरण प्रकोप वा दुर्घटनामा को पाठ्यक्रम मा क्षतिग्रस्त गर्न सकिन्छ);
जिम्मेवारी (कम्पनीहरु जसको गतिविधिहरु वातावरण हानि सक्षम छन्)।
केही देशहरूमा, पर्यावरण बीमा अवश्य छ। यो असफलता उत्पादन कि वातावरण (जस्तै, तेल पोखिन्छ) गर्न भारी क्षति हुन सक्छ हुन सक्छ जो कम्पनीहरु मुख्य रूप लागू हुन्छ।
कहिलेकाहीं कम्पनीहरु पनि उच्च जोखिम संग ग्राहकहरु संग सम्झौताहरू प्रवेश। आफूलाई रक्षा गर्न, कम्पनीहरु अर्को व्यक्ति, को reinsurer सँग सम्झौता बनाउन। बाँकी दोस्रो कम्पनी हस्तान्तरण गरिएको छ, जबकि जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति भाग, तिनीहरूलाई लागि रहन्छ। तसर्थ, बीमा वित्तीय सन्तुलन हासिल। जोखिम को स्थानान्तरण लागि प्रक्रिया प्रक्रियाहरू भनिन्छ। एक श्रृंखला यस्तो यस्तो माध्यमिक बीमा कम्पनी रूपमा स्थान, कुनै पनि नम्बर समावेश गर्न सक्नुहुन्छ tertiary जिम्मेवारी को एक भाग हस्तान्तरण गर्ने अधिकार छ। त्यहाँ सम्झौताको यस प्रकारको विभिन्न प्रकारका छन्।
अनिवार्य मा REINSURANCE को वर्गीकरण:
सम्झौता (कम्पनी वा व्यक्तिगत उहाँले अर्को व्यक्ति जिम्मेवारी, साथै यो साझेदारी को आकार पारित गर्न चाहन्छ कि छनोट);
स्वचालित (reinsurers केही कम्पनीहरु सम्झौता, सबै लेनदेन केही मापदण्ड विषय हो कि परिणाम संग, तिनीहरूलाई जाने)।
यो प्रसारण अंश दुई तरिकामा सेट गर्न सकिन्छ। समानुपातिक बीमा commensurate जिम्मेवारी क्षतिपूर्ति र बोनस प्रदान गर्दछ। तसर्थ, लाभ र प्राथमिक र माध्यमिक बीमा कम्पनी मिलान को लागत। को अंश पहिचान गर्न अर्को तरिका तिनीहरू विशेष एउटा ठूलो घाटा लाग्न सक्छ मा, सम्झौता गर्न दलहरू को चासो र आनुपातिक छैनन् रूपमा, disproportionate छ। यी अवधारणा र जहाँ जिम्मेवारी र पुरस्कार धेरै व्यक्ति बीच वितरण गर्दै बीमा, आधारभूत प्रकार हो।
सार्वजनिक बाध्यकारी सम्झौता
सम्झौताको दुई प्रकारका उहाँ जसलाई संग, बीमा कम्पनी आधारमा प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ। संगठन स्वामित्व को देश मा छ जब, यी व्यवस्था राज्य भनिन्छ, र यो कानुनी निकायहरूको पर्छ भने - निजी। सम्झौताको यो पहिलो प्रकार मा, रूसी व्यवस्था अनुसार, यो अवश्य छ। रकम जो कारण ठेके राज्य यस उद्देश्यका लागि विनियोजन छन्।
यो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका राज्य अनिवार्य अर्थव्यवस्था मा बीमा खेल्छ। अवधारणा, प्रकार, नियम र सम्झौताको यो फारम को दर स्पष्ट परिभाषित छन्। राज्य अन्तर्गत अनिवार्य बीमा व्यवस्था को सद्गुण द्वारा एक सम्झौता गर्न दलहरू बीच भनेर उत्पन्न भएको सम्बन्धमा बुझाउँछ। यो सम्पूर्ण जनसंख्याको या मान्छे को ठूलो समूह समेट्छ। त्यहाँ अनिवार्य बीमा केही प्रकार छन्:
वाहन मालिक (CTP) को दायित्व;
खतरनाक सुविधाहरु को मालिक को।
सम्झौता यस प्रकारको बाध्यकारी छैन र पहल विषय हो। सम्बन्ध पहिले नै वर्णन प्रकारका, विषय हो कि नियमहरू विपरीत एक स्वैच्छिक बीमा, यस्तो सम्झौता अवधारणा र प्रकार मात्र सामान्य मामलामा व्यवस्था गरेर स्थापना गरिनेछ। विशिष्ट दर र सर्तहरू सम्झौता को दल द्वारा निर्धारित। यसको प्रजाति बीमा समावेश:
स्वास्थ्य (लगातार र कारण रोग);
प्राकृतिक प्रकोप बाट;
वाहन मालिक जिम्मेवारी;
वित्तीय जोखिम र अरूलाई।
सम्बन्ध यस प्रकारको यसलाई आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन यदि कम्पनी, बीमा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात्, ग्राहकहरु छनौट कवरेज विशेषता द्वारा छ। यो स्वैच्छिक सम्झौता मा सधैं आफ्नो समय छ। करार को आफ्नो अन्त मा, तपाईं फेरि शुल्क तिर्ने द्वारा नविकरण गर्न सक्नुहुन्छ।
अवधारणा र सामाजिक बीमा को प्रकार
सम्झौता यस प्रकारको अन्तर्गत मतलब सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, अशक्तता, रोग, बेरोजगारी वा breadwinner को हानि संग नागरिक endow डिजाइन गरिएको छ जो। अवधारणा र सामाजिक बीमा को प्रकार तीन छन् जो को सम्झौता, को रूप निर्भर फरक हुन सक्छ:
पहिलो मामला मा, एउटा सम्झौता को निष्कर्षमा स्वैच्छिक छ र राज्य प्रदान कहाँ उपयुक्त सुरक्षा सामाग्री परिस्थितिमा बाहिर छ। सम्बन्ध लोकतन्त्र, साझेदारी र आत्म-सरकार सिद्धान्त मा निर्माण गरिन्छ। भुक्तानीको मात्रा स्थिर छैन र सिधै कर्मचारीहरु 'आय को स्तर मा निर्भर गर्दछ।
अवधारणा र अनिवार्य सामाजिक बीमा को प्रकार स्पष्ट रूसी संघ को कानून द्वारा परिभाषित। यो राज्य सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आफ्नो वित्तीय अवस्था मा एक गिरावट संग कार्यकर्ता प्रदान उद्देश्य भाग हो। त्यहाँ अनिवार्य सामाजिक बीमा केही प्रकार छन्:
एक परिवारको सदस्य को मृत्यु जडानमा।
सम्झौता को निष्कर्ष
कागजात माथि चित्रकला अघि आउँछ underwriting प्रक्रिया - अनुमानित बीमा घटना को जोखिम। देखि सीधा पुरस्कार को आकार मा निर्भर गर्दछ, तर किनभने प्रक्रिया होसियार गणना आवश्यक छ। गलत तरिकाले मूल्यांकन जोखिम महत्वपूर्ण बर्बाद र कम्पनी को दिवाला गर्न सक्छ।
सम्झौता को निष्कर्षमा लागि आधार दुवै लिखित र मौखिक फारम हुन सक्छ कि ग्राहकको अनुप्रयोग हो। यो कागजात मा, policyholder जोखिम सबैभन्दा सही मूल्यांकन दिनेछु कि तथ्य विवरण मा सूची हुनुपर्छ। सम्झौता दुई प्रकारका या त बनेको गरिनेछ: एक सम्झौता वा नीति को रूप मा। पहिलो मामला मा, कागजात दुवै दल द्वारा हस्ताक्षर र दोस्रो - मात्र बीमा कम्पनी।
श्रम र पेन्सन बीमा अनुभव: कसरि गणना गर्न कसरी देखाउन
एक मताधिकार गर्दा CASCO के हो? CASCO मा मताधिकार: समीक्षा, अवस्था
लाभांश evroprotokol: अधिकतम रकम र समय
दुर्घटना बीमा। दुर्घटना विरुद्ध बीमा को सम्झौता
को क्रसओभर एसयूवी फरक के छ? उपयोगी लेख
आकृति जानकारी - यो जानकारी ... विशेषताहरु
Sandanski रिजर्ट, बुल्गारिया: फोटो र होटल समीक्षा
आफ्नो बच्चाको लागि कला स्कूल छनौट
ओपस - एक सांगीतिक अवधि। के संगीत को उद्देश्य अवधारणा छ?
बिरालोहरु मा रेबीज - एक घातक रोग
को symptomatic उपचार के गर्छ? Symptomatic उपचार साइड इफेक्ट। क्यान्सर संग विरामीहरु को Symptomatic उपचार
रेटिना को धब्बेदार अध: पतन: लक्षण र उपचार
कसरी इस्टर मा एक खरायो आकर्षित गर्न
बिरालोहरु लागि घरहरू र scratching पोस्ट के हुन्?